Cloudimage.io: Sary voatahiry cache, naoty, navaina be na Watermarked ho serivisy | Martech Zone
Cloudimage.io: Sary voatahiry cache, naoty, navaina be na Watermarked ho serivisy
Alatsinainy Janoary 8, 2018 Douglas Karr
Vao tsy ela akory izay, niasa kely tamin'ity tranonkala ity aho mba hanafainganana ny hafainganana. Nesoriko ny taonina amin'ireo faritra mihetsika mba hanatsorana ny fomba hanangonam-bola sy hampidirina azy, saingy mbola miadana loatra ny hafaingan'ny tranokala. Matoky aho fa misy akony amin'ny mpamaky ahy sy ny an'ny fikarohana biolojika tonga. Rehefa avy nangataka ny fanampian'ny namako, Adam Small, izay mandeha haingana amin'ny varatra sehatra marketing marketing, ny entana voalohany nasongadiny dia ny fananako sary lehibe be ao anaty sidebar podcast ahy.
Nahagaga izany satria ny sary dia avy amin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo izay tsy dia voafehiko loatra. Raha ny tokony ho izy dia tiako ny nanaparitaka sy nanidy azy ireo teo an-toerana, saingy avy eo dia tsy maintsy nanoratra fampidirana somary sarotra aho. Tsy lazaina intsony fa, na dia miaraka amina fampidirana marimaritra iraisana aza dia hampihoron-koditra ny fotoana ilana azy amin'ny fampidinana sy fanovana ireo sary. Ka rehefa avy nitady tamin'ny Internet aho dia nahita ny serivisy tonga lafatra - Cloudimage.io
Endri-javatra an'ny Cloudimage.io
Ao amin'ny enta-mavesatra voalohany, ny Cloudimage dia misintona ny sary niavinao ho an'ny mpizara / sombiny S3, ary ampirimin'izy ireo amin'ny fotodrafitrasa fanovana habe azy ireo.
Ny Cloudimage.io dia afaka manova ny habeny, manangona, manamboatra, mari-drano ary manery ny sary mba hamaly azy sy hamerenanao fotoana.
Ny sarinao dia aterina amin'ny mpanjifanao amin'ny hafainganam-pandehan'ny hazavana amin'ny alàlan'ny CDN haingana, ka mahatonga ny fiovam-po tsaratsara kokoa sy ny varotra bebe kokoa.
Ho fampiharana ahy dia nanana fahana podcast aho izay tiako aseho ny sary podcast amin'ny 100px fotsiny amin'ny 100px fa, matetika, ny sary tany am-boalohany dia goavambe (amin'ny lafiny sy ny fisie). Noho izany - miaraka amin'ny Cloudimage, afaka mampiditra ny URL URL fotsiny izahay mankany amin'ny Cloudimage API, ary ny sary dia refesina sy haverina cache tanteraka.
Jereo ny URL feno:
Subdomain famantarana ho CloudImage
Baiko handefasana ny sary
Ny refy dia napetraka ho 100px amin'ny 100px
Ny lalan-drakitra voalohany
Afaka nanidy ny URL nataoko ihany koa aho mba hahafahako mampiasa ny Cloudimage API mba tsy hahafahan'ny hafa mangalatra azy. Tao anatin'ny minitra vitsy dia efa nomaniko ny vahaolana ary tao anatin'ny ora izay nampiharako ny vahaolana tao aminay Podcast Fahano Widget.
Tags: sinycloudimagefamatraranacropfilanjanacaching amin'ny saryfamatrarana saryfanapahana saryfanovana sarywatermark sarys3famantaranaModèleWatermarking
Outook Customer Manager: A App Manager ho an'ny Office 365 Business Premium
Tsy ny paikadin'ny atiny rehetra no mila tantara